एक वर्षीय चेलापन पाठ्यक्रम | Word of Truth, Nepal
विश्वासीको अनन्त सुरक्षा (१)
ख्रीष्टमा विश्वास राखेको व्यक्तिको ओहोदालाई बाइबलमा “अनन्त सुरक्षा” भन्ने शब्दावलीले बयान गरेको नपाइए तापनि यसका लागि “अनन्त जीवन” (यूहन्ना ३:१६) र “अनन्त सान्त्वना” (२ थेस्सलोनिकी २:१६) जस्ता शब्दावली भने प्रयोग भएका छन्। परमेश्वरको सन्तान ख्रीष्टमा अनन्तसम्म सुरक्षित छ भनेर बाइबलले सिकाउँछ।
येशू विश्वासीका पापका लागि मर्नुभयो – सबै पापका लागि। उहाँको रगत नै परमेश्वरको व्यवस्थाले माग गरेको दण्डको पूरा सट्टाभर्ना थियो; त्यो शतप्रतिशत पर्याप्‍त थियो। विश्वासीले आफ्नो मुक्ति गुमाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्नेहरूले येशूले गरिदिनुभएको महान् कार्यलाई बुझ्दैनन्। उनीहरूले सुसमाचारलाई सही ढङ्गले बुझ्दैनन्।
हेर्नू: एफेसी १:७ – “छुटकारा” को माने दाम तिरी किनिएको भन्ने हुन्छ। येशूले हामीलाई पापको दास-बजारबाट किनेर पूर्णरूपमा छुटकारा दिनुभयो।
हेर्नू: रोमी ३:२४-२५ – “धर्मी ठहराइनु” को माने परमेश्वरद्वारा धर्मी भनेर घोषणा गरिनु हो। विश्वासी आफैमा त धर्मी छैन, तर ऊ स्वयम् प्रधानन्यायधीशद्वारा नै धर्मी घोषणा गरिएको छ। यस्तो घोषणाको आधारचाहिँ यो हो कि परमेश्वरका सामु रहेको विश्वासीको पापलाई हटाउन येशूले पूरै सट्टाभर्ना तिरिदिनुभयो।
“प्रायश्चित” भन्ने शब्दले यस सट्टाभर्नालाई जनाउँदछ। यसको माने हो कसैलाई तिर्नुपर्ने कुरा पूरै मात्रामा तिरिदिएर ऋण चुक्ता गर्नु। येशूले गर्नुभएको महान् कार्य यही थियो। पापीले परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग गरेको छ र त्यसको उचित सट्टाभर्ना तिर्न ऊ असमर्थ छ। पापीको सट्टामा येशूले उक्त ऋण तिरिदिनुभयो। तिर्नै नसक्ने ऋण हामीलाई परेको थियो; आफूलाई नलागेको ऋण येशू ख्रीष्टले तिरिदिनुभयो।
“नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्” (यूहन्ना ३:१६) — यदि परमेश्वरले विश्वासीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ भने र ऊ कहिल्यै नष्ट हुँदैन भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने, उसले आफ्नो मुक्ति कसरी “गुमाउन” सक्छ र? ऊ नष्ट हुँदैन भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ भने विश्वासी कसरी नष्ट हुन्छ? त्यसो हुन गयो भने त परमेश्वरको प्रतिज्ञा धूलोमा मिल्न जानेथ्यो।
परमेश्वरले “तिमीहरूलाई अन्तसम्म स्थिर पार्नुहुनेछ” (१ कोरिन्थी १:८) — यस्ता‍-यस्ता प्रतिज्ञाहरूले विश्वासीको मुक्तिलाई सुनिश्चित गर्दछन्।
“सबै आत्मिक आशिषहरूले…आशिषित” (एफेसी १:३) — यदि एक विश्वासी ख्रीष्टमा सबै आत्मिक आशिषहरूले आशिषित पारिसकिएको छ भने, कसरी ऊ यसबाट बञ्चित हुन सक्छ र कसरी उसले आफ्नो मुक्ति गुमाउने सक्छ र? यी आशिषहरू “ख्रीष्टमा” छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। विश्वासीको मुक्ति ख्रीष्टभित्र सञ्चय गरिएका छन् अनि यो मुक्ति विश्वासीको जीवन वा कामहरूमा कुनै हिसाबले पनि आधारित छैन।
“पवित्र आत्माले छाप मारियौ” (एफेसी १:१२-१४) — पवित्र आत्माले छाप मारिनु चाहिँ उहाँले अनन्त छुटकारा दिनुभएको छ भन्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञा पाउनु हो।
“स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाल्नुभयो” (एफेसी २:५-६) — स्वर्ग जानलाई एउटा विश्वासी मृत्युलाई पर्खनुपर्दैन; परमेश्वरको नजरमा ऊ ख्रीष्टसँग स्वर्गमा बसालिसकिएको छ; यो उसको नयाँ ओहोदा हो। विश्वासीको मुक्ति पूरै ख्रीष्टभित्र सञ्चय गरिएको छ। ऊ उहाँसँग मरिसकेको छ, उहाँसँग बौरेर उठिसकेको छ र उहाँसँग जिउँदछ।
“स्वर्गको लागि योग्य” (कलस्सी १:१२-१४) — विश्वासीलाई स्वर्ग लानको लागि ख्रीष्टले सबै आवश्यक काम गरिसक्नुभयो; यस सम्बन्धमा विश्वासीले गर्नुपर्ने कुनै काम बाँकी छैन; हाम्रा कामहरूले हामीलाई स्वर्गका लागि योग्य बनाउने होइन वा ख्रीष्ट जे गरिसक्नुभयो र प्रबन्ध गर्नुभएको छ त्यसमा एक विन्दु वा एक मात्रा पनि थप्न सक्दैन।
“बलियो सान्त्वना” (हिब्रू ६:१७-१९) — मुक्तिलाई बयान गर्न यस खण्डमा प्रयोग गरिएका शब्दावली उदेकलाग्दा छन्। “कहिल्यै बदलिन नसक्ने कुराहरू” को माने प्रस्ट छ: अपरिवर्तनीय; जब परमेश्वरले घोषणा गर्नुहुन्छ वा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो पक्का हुन्छ। “सान्त्वना” को माने हौसला वा उत्साह भन्ने हुन्छ; विश्वासीको सान्त्वना कमजोर छैन, अनिश्चित छैन; त्यो “बलियो” छ। “आशा” भन्नाले कुनै संसारमा जस्तो कुनै अनिश्चित कुरा भन्ने बुझिँदैन। यसको मतलब “म मुक्ति पाउँछु कि भनी आशा गर्दैछु” होइन कि बरु “मैले मुक्ति पाउनेछु भनी म निश्चित छु” भन्ने हो। विश्वासीको आशालाई “प्राणको लङ्गर जो सुरक्षित र दृढ छ” भनेर बयान गरिएको छ। यी सब साँचो हुन सके किनभने ख्रीष्टले पापको पूरै ऋण तिरिदिनुभयो।
ख्रीष्टमा आफू अनन्तसम्म सुरक्षित छु भन्ने ज्ञान विश्वासीको “टोप” हो जसले उसलाई शैतानबाटका शङ्काका अग्निमय वाणहरूदेखि सुरक्षा दिन्छ (१ थेस्सलोनिकी ५:८)।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-03 14:31:382020-11-13 13:17:20विश्वासीको अनन्त सुरक्षा (१)
प्रेरित २:३८ लाई विचार गर्नुहोस्। एक विश्वासीले आफ्‍ना पापहरूको क्षमा पाउन भनी बप्तिस्मा लिँदैन तर आफ्ना पापहरूको क्षमा भइसकेकाले उसले बप्तिस्मा लिन्छ। “पापहरूका क्षमाका निम्ति” भन्ने वाक्यांशको माने कि त “पापहरू क्षमा पाउनका लागि” भन्ने हुन सक्छ, कि त “पापहरू क्षमा भएकाले” भन्ने हुन सक्छ। यस्तै वाक्यांश पछिल्लो अर्थमा लूका ५:१३-१४ मा प्रयोग भएको छ। “आफ्नो शुद्धिका निम्ति” आफूलाई पूजाहारीकहाँ देखाऊ भनेर कोरीलाई बताइयो किनकि ऊ ख्रीष्टद्वारा शुद्ध भइसकेको थियो।
हामीले यहाँ बप्तिस्मा दिने तरिकाको धरि चर्चा गर्न आवश्यक पर्नु दुःखकै कुरा हो किनकि यसबारेमा बाइबलले यति स्पष्ट गरी बताउँछ तरैपनि यसलाई चर्चा गरिनैपर्छ किनभने ख्रीष्टियनको नाउँ लिने धेरैजसोले आफ्नो अभ्यासमा छिट्का दिएर र खन्याएर बप्तिस्मा दिन्छन्। तर बाइबलीय बप्तिस्मा चोपलेर हो अथवा पानीमा “दफन” गरेर। यसका पाँचओटा प्रमाणहरू यस प्रकार छन्:
येशूको बप्तिस्मा यसरी नै भएको थियो। उहाँ “पानीबाट माथि निस्कनासाथ” भनेर लेखिएको छ (मर्कूस १:१०)।
सुरुका ख्रीष्टियनहरूले हामीलाई यही नमुना छोडेका छन्। प्रेरित ८:३८-३९ मा प्रचार गर्ने र बप्तिस्मा लिने “उनीहरू दुवै पानीभित्र पसे” र “उनीहरू पानीबाट बाहिर निस्के”। यसको एउटै कारण थियो चोपलेर बप्तिस्मा दिने चलन। नत्र भने प्रचारकले अञ्जुलीमा अलिकति पानी लिएर प्रयोग गरे पुग्नेथ्यो, पूरै भिज्नु आवश्यक पर्ने थिएन।
बप्तिस्मापछि आउने कुरा ख्रीष्टियन सेवा र पवित्र जीवन हो (प्रेरित २:४१-४२)। बप्तिस्मा लिने व्यक्तिले आफू पुरानो जीवनको लेखि मेरको छु र अब उसले ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको प्रभुको रूपमा पछ््याउन थालेको छु भन्ने कुराको गवाही दिइरहेको हुन्छ। यो ज्यादै गम्भीर र गहन अभ्यास हो। यरुशलेमको पहिलो मण्डलीका ख्रीष्टियनहरू “प्रेरितहरूका शिक्षामा, सङ्गतिमा, रोटी-भँचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे”।
“बप्तिस्मा” शब्दको अर्थ ___________ हो।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-03 14:19:372020-12-06 19:30:50बप्तिस्मा के हो?
मर्नुहुने को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्: मर्नुहुने ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। येशू नै पुरानो नियममा प्रतिज्ञा गरिनुभएको ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। “ख्रीष्ट” भन्ने नाउँ “अभिषिक्त जन” भनी जनाउने ग्रीक शब्द हो। हिब्रुको “मसीह” भन्ने शब्दको उही अर्थ हुन्छ (भजनसङ्ग्रह २:२; १३२:१७)। येशू अभिषिक्त अर्थात् चुनिएका जन हुनुहुन्छ। मसीह संसारमा पहिलो पटक आउनुहुँदा उहाँ हटाइनुहुनेछ अर्थात् मानिसका पापका लागि मर्नुहुनेछ भन्ने कुरा (दनिएल ९:२५-२६) अनि उहाँ पछि फेरि आउनुहुनेछ र दाऊदको सिंहासनबाट शासन गर्नुहुनेछ र पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ (यशैया ९:६-७) भन्ने कुरा अगमवक्ताहरूले बताएका थिए।
उहाँको गडाइ हुँदा भविष्यवाणी पूरा हुन गयो। यो “पवित्र शास्त्रहरूमुताविक” भएको थियो। येशू एकजना धनी मानिसको चिहानभित्र गाडिनुहुनेछ भनेर बाइबलले भविष्यवाणी गरेको थियो (यशैया ५३:९)। येशू जन्मनुभन्दा ७१० वर्ष अगाडि लेखिएको यो भविष्यवाणी त्यो बेला पूरा भयो जब एकजना धनी चेला आएर येशूलाई क्रूसबाट तल झारे र आफ्नै चिहानमा गाडे (मत्ती २७:५७-६०)।
पुरानो नियमका भविष्यवाणीहरूले सुसमाचार सत्य छ भनेर प्रमाणित गर्दछन्। उहाँ “पवित्र शास्त्रहरूमुताविक” मर्नुभयो र बौरिउठ्नुभयो। यी बुँदाहरूलाई हामीले हेरिसक्यौं।
प्रत्यक्ष साक्षीका गवाहीहरूले सुसमाचार सत्य छ भनेर प्रमाणित गर्दछन् (१ कोरिन्थी १५:५-८)। बाइबल एउटा “अन्धविश्वास” होइन। यो चाहिँ “अनेकौं अचूक प्रमाणहरू” मा आधारित विश्वास हो (प्रेरित १:३)। बाइबलीय विश्वासमा “निश्चयता” हुन्छ, “प्रमाण” हुन्छ (हिब्रू ११:१)।
“व्यर्थमा विश्वास गर्नु” भनेको के हो (१ कोरिन्थी १५:२)?
गलत कुरालाई विश्वास गर्नु व्यर्थमा विश्वास गर्नु हो (यूहन्ना २:२३-२५)। यी यहूदीहरूले येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा नभई सांसारिक खाँचोहरू पूरा गरिदिने र उनीहरूलाई खुवाउने, रक्षा गरिदिने व्यक्तिको रूपमा “विश्वास गरे”। हेर्नू: यूहन्ना ६:१४,१५,२६,६६। त्यसरी नै आज धेरैजनाले येशूलाई गलत तरिकाहरूमा विश्वास गर्छन्। उनीहरू येशूकहाँ आउँछन् र उहाँलाई प्रार्थना गर्छन् तर उनीहरू के चाहन्छन् भने उहाँले उनीहरूको समस्याहरू समाधान गरिदिनुभएको, उनीहरूको स्वाभिमान वृद्धि गरिदिनुभएको, वा उनीहरूलाई धनी बनाइदिनुभएको वा निको पारिदिनुभएको वा अरू कुरा गरिदिनुभएको तर उनीहरू होच्चिएर पापीको रूपमा आएका हुँदैनन् र केवल उहाँलाई नै आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा भरोसा गर्दैनन्।
पश्चात्ताप बिनाको “विश्वास” गर्नु व्यर्थमा विश्वास गर्नु हो (प्रेरित २०:२१; २६:२०)। धेरैजना आफ्ना जीवनहरू आत्मसमर्पण नगरीकन “येशूमा विश्वास” गर्न चाहन्छन्, तर पश्चात्तापबिना मुक्ति पाउनु असम्भव छ। हामी याकूब २:१९-२० मा देख्छौं, जीवन बदलिने गरीकन आत्मसमर्पणका साथ विश्वास गर्नुको सट्टा दिमागले मात्र विश्वास गर्नु सम्भव छ। जीवन बदलिने गरी आत्मसमर्पणका साथ विश्वास गर्नुचाहिँ पश्चात्ताप हो जुनचाहिँ मनको परिवर्तन हो जसले जीवनको परिवर्तन ल्याउँदछ। दुष्टात्माहरू “परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्” तर मुक्ति पाउने किसिमले त होइन। उहाँ हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरू जान्दछन् तर उनीहरू उहाँको अधीनमा बस्न चाहँदैनन्। धेरैजनाले “येशूमा विश्वास” त गर्छन् तर केवल उहाँ २,००० वर्ष अघि संसारमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने अर्थमा मात्र।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-03 14:01:332020-12-06 19:28:55सुसमाचार के हो?
बाइबलमा “विश्वास” शब्दको माने भरोसा गर्नु, भर पर्नु, कसैमा आश्रित बन्नु भन्ने हुन्छ। मुक्ति पाउनलाई निजले पूर्ण रूपले आफ्नो प्राणका लागि र आफ्नो अनन्त भविष्यका लागि प्रभु येशूमा आश्रित बन्नैपर्छ। निजले पापहरूको क्षमा पाउनका लागि र परमेश्वरका सामु धर्मी ठहराइनका लागि र स्वर्गमा पुर्‍याइनका लागि केवल येशूमा भर पर्नुपर्छ।
मुक्ति पाउनलाई येशू नै प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू मेरा निम्ति पूरा गर्नुहुनेछ भनेर म पूर्ण रूपले विश्वस्त हुनैपर्छ। साँचो मुक्ति भनेको “म-निश्चित-छु” भन्ने खालको विश्वास हो। येशूका सुरुका चेलाहरूको विश्वास यस्तै किसिमको थियो। यूहन्ना ६:६६-६९ ना पत्रुसको गवाही कस्तो थियो हेर्नुहोस्। साँचो रूपमा मुक्ति पाएको व्यक्तिको गवाही यस्तो हुन्छ। हामी पक्का हुन सक्ने कारण परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूले गर्दा नै हो (१ यूहन्ना ५:११-१३)। तर अर्कातिर “मैले मुक्ति पाउँला कि भन्ने आशा गरेको छु” भन्ने “विश्वास” गरेकाहरूको कुरालाई तुलना गर्नुहोस्; उनीहरूको भनाइको तात्पर्य यो हो कि उनीहरू पक्का छैनन्। एकपटक मैले एकजना नेपालीलाई भेटेँ जसले मलाई आफूलाई येशूमा ९९% विश्वास लागेको कुरा बताए। तर कुरा के भने, त्यतिले पुग्दैन! डुङ्गाको उदाहरणलाई विचार गर्नुहोस्: तपाईंले आफ्नो शरीरको १०० प्रतिशत वजनलाई नै डुङ्गामा सुम्पनुपर्छ, ९९ प्रतिशत सुम्पन्छु भन्न मिल्दैन!।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-03 13:42:302020-12-06 19:27:47विश्वास के हो?
मुक्ति मानिसका कामले पाइने होइन; कामहरू मुक्ति पाइसकेपछिका त्यसका प्रतिफल हुन् (एफेसी २:८-१०)। जीवन सुध्रिनु भनेको त केवल मानिससितको र यस जीवनसितको सम्बन्ध राख्‍ने कुरा हो, तर पश्चात्ताप भनेको परमेश्वरसतिको र अनन्त कुराहरूसितको सम्बन्ध राख्‍ने कुरा हो। मुक्ति पाउनलाई मान्छेले आफ्नो जीवन बदल्नुपर्छ र आफ्नो पाप छाड्नुपर्छ भन्ने आभास मानिसहरूलाई दिनु गलत हुन्छ – त्यसो नगर्नलाई हामी होसियार हुनुपर्छ। जीवन परिवर्तन गराउने मुक्तिको भाग परमेश्वरको हो, मान्छेको होइन।
कतिपय क्याथोलिक बाइबलहरूमा “पश्चात्ताप” लाई “तपस्या गर्नु” (penance) भनेर अनुवाद गरिएको छ। त्यसअन्त्तर्गत पूरोहीतलाई पाप स्वीकार गर्नु, पछुताउनु, पापमोचन (क्षमा भएको भनी पूरोहीतले घोषणा गर्नु), प्रायश्चित पर्दछन्। क्याथोलिक तपस्या कामले कमाउने मुक्ति हो जसलाई बाइबलले रद्द गर्दछ।
मानिसले गल्ती गरेकोमा पछुतो माने तापनि मुक्ति ल्याउने साँचो पश्चात्ताप उसले नगर्न सक्छ भन्ने कुरा बाइबलले बताउँछ। यसलाई २ कोरिन्थी ७:१० मा “सांसारिक शोक” भनेर बयान गरिएको छ। पुरानो र नयाँ नियममा यसका उल्लेखनीय उदाहरणहरू छन्। पुरानो नियमको प्रमुख उदाहरण शाऊल राजा हो। विभिन्न पापपूर्ण काममा उनी पक्राउ परेकोमा उनी दुःखित थिए तर आफूले पश्चात्ताप गरेको उनले कहिल्यै देखाएनन् किनकि उनको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएन (१ शमूएल १५:२४; २४:१७; २६:२१)। पछुतो मान्ने तर परमेश्वरतर्फ पश्चात्ताप नगर्ने मान्छेको नयाँ नियमको उदाहरण चाहिँ यहूदा हो (मत्ती २७:३-४)।
कतिले पश्चात्तापलाई विश्वास गर्नु भन्ने अर्थमा नै परिभाषित गरेका छन्। एकजना परिचित प्रचारकले यसलाई “अविश्वासबाट विश्वासमा फर्कनु” भन्ने परिभाषा दिएका छन्। तर यदि यो सत्य हुँदो हो ता, बाइबलमा उल्लेखित प्रचारकहरूले पश्चात्तापको प्रचार नगर्नेथिए। पावलले “परमेश्वरतर्फ मन फिराउनुपर्छ” अर्थात् पश्चात्ताप गर्नुपर्छ र “प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्छ” भनी प्रचार गर्थे भनेर हामीले हेरिसक्यौं (प्रेरित २०:२१)। प्रेरित २६:२० लाई विचार गर्नुहोस्; त्यहाँ पावलले विश्वासीहरूलाई “पश्चात्ताप लायकका कामहरू गर” भन्दै अधिकारयुक्त माग राखे। यसको मतलब पश्चात्तापको माने असल कामहरू गर्नु होइन; यसको मतलब पश्चात्तापको माने मनको एउटा प्रभावशाली परिवर्तन हो जसको फलस्वरूप असल कामहरू उत्पन्न हुन्छन्।
पश्चात्तापको माने मैले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छु भन्ने कुराको स्वीकार गर्नु र त्यसका निम्ति दुःखित बन्नु हो (प्रेरित २०:२१)। पश्चात्ताप “परमेश्वरतर्फ” गरिनुपर्ने कुरा हो किनकि मैले अप्रसन्न तुल्याएको परमेश्वरलाई हो। उहाँले मानिसलाई आफ्नो निम्ति बनाउनुभएको थियो, अनि उहाँले मानिसलाई आफ्ना नियमहरू पालन गर्नलाई बनाउनुभयो। तर हामीले उहाँलाई हाम्रा पिठिउँ फर्काएका छौं र उहाँका नियमहरू उल्लङ्घन गरेका छौं र हामीले यसको पश्चात्ताप गर्नुपर्छ भन्ने माग उहाँले राख्‍नुहुन्छ। पश्चात्तापको माने म असल छैन भनेर स्वीकार गर्नु हो, यहाँसम्म कि मेरो आफ्नै धार्मिकता त तीनदोब्बर पवित्र परमेश्वरका सामु फोहोर झुत्राझैं छन् भनी मानी लिनु हो (यशैया ६४:६)।
पश्चात्तापको माने जीवनको परिवर्तन होइन; पश्चात्तापको माने परमेश्वरको बारेमा र पापको बारेमा मनको यस्तो परिवर्तन हो जसको फलस्वरूप जीवनको परिवर्तन हुन्छ। “मैले विश्वास गरेँ” वा “मैले ग्रहण गरेँ” भन्ने धेरैजना हुन्छन् जसका मनमा नयाँ जीवन जिउने कुनै सङ्कल्प नै हुँदैन। उनीहरू ख्रीष्टको चेला बन्न इच्छुक छैनन्। उनीहरू स्वर्ग जाने टिकट चाहन्छन्, नरकबाट जोगिन चाहन्छन्, तर उनीहरू आफूखुसी जीवन व्यतित गरिरहन चाहन्छन्। उनीहरू येशूमा विश्वास गर्न त चाहन्छन् तर उहाँको आज्ञा भने मान्न चाहँदैनन्। बाइबलले बताएको मुक्ति यो होइन। सत्य परमेश्वरको उपासना गर्न र उहाँको सेवा गर्न सक्नलाई एउटा पापी आफ्ना झूटा देव-देवीहरूदेखि अर्थात् स्वपूजादेखि समेत फर्कन तयार हुनुपर्छ।
उडाउ पुत्र “होशमा आयो” (लूका १५:१७-२०)। यसको तात्पर्य उसलाई पवित्र आत्माले कायल पार्नुभयो र प्रकाश दिनुभयो। उसले आफूलाई नम्र तुल्यायो, परमेश्वरको विरुद्धमा र आफ्नो बुबाको विरुद्धमा उसले गरेको आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्‍यो; अनि बेग्लै दिशातर्फ उन्मुख हुने गरी ऊ फनक्कै फर्क्यो। पश्चात्ताप भनेको यस्तो हुन्छ। उसले पश्चात्ताप गरेको थियो भन्ने कुराको प्रमाण यसैमा देखिन्छ कि ऊ घर फर्क्यो र बुबासितको आफ्नो सम्बन्धलाई ठीक-ठाक पार्‍यो; उसले आफूलाई नम्र तुल्यायो र बुबाको घरमा नोकर भएर काम गर्न तत्पर भयो।
थेस्सलोनिकीहरू “जीवित र सत्य परमेश्वरको सेवा गर्नाका निम्ति…मूर्तिहरूबाट परमेश्वरतर्फ” फर्के (१ थेस्सलोनिकी १:९)। बाइबलीय पश्चात्ताप यस्तो हुन्छ। उनीहरू केवल मूर्तिहरूबाट फर्केका होइनन्; उनीहरू परमेश्वरतर्फ मूर्तिहरूबाट फर्केका हुन् [अङ्ग्रेजी: “turned from idols to God” होइन तर “turned to God from idols”]। यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ। यदि एउटा मान्छे परमेश्वरतर्फ नै फर्केको छ भने उसका पहिलेका देव-देवीहरू र उसको पुरानो जीवन उसको पिठिउँको पछाडि हुन्छ। साँचो पश्चात्ताप यस्तो हुन्छ।
“येशूमा विश्वास गर्नु” नै पर्याप्‍त होइन। दुष्टात्माहरूले समेत विश्वास गर्छन् (याकूब २:१९)। भन्ने हो भने, दुष्टात्माहरू थरथर काम्छन्; अर्थात् सामान्य “ख्रीष्टियन” हरू भन्दा त उनीहरू पो बढी परमेश्वरको डर मान्दा रहेछन्!
मेरा परममित्रहरू सांसारिक थिए अनि एक दिनको कुरा हो, मण्डलीका हामी तीनजना साथीहरू एकजना मण्डली नजाने साथीसँगै सुन्तला बारीमा हिँड्दै थियौं। ऊचाहिँ हाम्रो “नाइके” थियो। हामी हाहाहुहू गर्दै लहडबाजीमा सँगै दगुर्थ्यौं र कैयौं सांसारिक बदमाशीमा सँगै फस्थ्यौं, तर किन हो कुन्नी हामीले मण्डलीको एउटा विशेष सभामा आउनलाई उसलाई मनाउन खोज्दैथियौं। फर्केर उसले हामीलाई हकार्‍यो, “म त्यहाँ किन जाने? तिमीहरूको जीवन मेरोभन्दा अलिकति पनि फरक छैन।” हाम्रो मुख बन्द भयो, किनकि उसको कुरा शतप्रतिशत सही थियो!
अभाव भनेको पश्चात्तापको थियो। म येशूमा “विश्वास गर्थेँ” जसरी दुष्टात्माहरूले पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्, तर त्योचाहिँ मुक्ति दिलाउने विश्वास थिएन किनकि त्यो पश्चात्तापरहित थियो।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-03 13:41:242020-12-06 19:24:18पश्चात्ताप के हो?